मन्त्री अधिकारीसँगै निभ्यो आशाको दीयो ! एक वर्षमा के गरे ? के गर्दै थिए ? « News24 : Premium News Channel
मन्त्री अधिकारीसँगै निभ्यो आशाको दीयो ! एक वर्षमा के गरे ? के गर्दै थिए ?
आशालाग्दा युवा नेताको अवसान-
काठमाडौं । नेपाली राजनीतिका आशलाग्दा युवा नेता एवम् सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित देशका प्रभावशाली सातजनाको अवसान भएसँगै ‘देश स्तब्ध’ भएको छ । नागरिक शोकमग्न छन् ।
वुधबार ताप्लेजुङ र तेह्रथुमको सीमानामा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएका मन्त्री अधिकारीसहितको शव बिहीबार काठमाडौं ल्याइयो ।
काठमाडौं ल्याइएसँगै दुर्घटनामा निधन भएकाको शव पोष्ट मार्टमका लागि महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पताल लगियो । मन्त्री अधिकारीको शवलाई श्रद्दान्जलीका लागि टुँडिखेलमा राख्ने भनिएको थियो । तर, समय अभावका कारण शुक्रबार बिहानदेखि मात्रै श्रद्धान्जलीका लागि राख्ने बताइएको छ । बिहीबारै श्रद्धान्जलीका लागि टुँडिखेलमा राख्ने तयारी थियो । श्रद्धान्जली दिन टुँडिखेल पुगेकाले मन्त्री अधिकारीलाई यसरी सम्झिए ।
अधिकारीको शवलाई गृहजिल्ला कास्की नै लगेर दाहसँस्कार गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । मन्त्री अधिकारीको निधनपछि मन्त्री परिषद् बैठकले बिहीबार राष्ट्रिय शोकको घोषणा गर्दै सार्वजनिक विदा दिएको थियो । अधिकारी निधनप्रति दुख व्यक्ति गर्दै विभिन्न राजनीतिक दल, नेता एवम् संघसंगठनले विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
आशाको ज्योति निभ्यो-
आशालाग्दा नेताको सूचीमा अग्रस्थानमै आउँथ्यो, मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको नाम । विद्यार्थी राजनीति हुँदै पार्टी राजनीतिमा प्रवेश गरेका अधिकारीले कहिल्यै पराजयको सामना गर्नु परेको थिएन । पोखरास्थित पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा अनेरास्ववियुको प्रारम्भिक कमिटी सदस्यदेखि, सभापति, जिल्ला अध्यक्ष, तत्कालिन गण्डकी अञ्चल अध्यक्षहुँदै केन्द्रीय अध्यक्षसम्मको जिम्मेवारी कुशलापूर्वक निर्बाह गरेका अधिकारी २०४६ सालदेखि पार्टी राजनीतिमा सक्रिय रहे ।
विद्यार्थी राजनीतिको सिलसिलामा सवारी साधनमा भाडा छुटका लागि अधिकारीले गरेको संघर्ष स्मरणीय छ । त्यस्तै, तत्कालिन युवाराज पारस शाहको ज्यादतीविरुद्ध आवाज उठाएर अधिकारीले नागरिक मन जितेका थिए ।
हँसिलो चेहेरा, मिजासिलो बोली, सहयोगी व्यवहार, पारदर्शी कार्यशैली र स्पष्ट वक्ताका कारण नेता अधिकारी झन्पछि झन् लोकप्रिय बन्दै गए । परिणामस्वरुप तत्कालीन नेकपा एमालेको कास्की जिल्ला कमिटी सचिव, अध्यक्षहुँदै २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा कास्कीबाटै सभासद्मा निर्वाचित भए ।
२०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि संविधानसभा सदस्य निर्वाचित हुन सफल अधिकारी पछिल्लो पटक सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित हुँदै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री भएका थिए । त्यसअघि संसदको विकास समिति सभापति भएर अधिकारीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । उनले संविधानसभाः लोकतन्त्र र पुनर्संरचना, समृद्ध नेपाललगायत पुस्तक पनि लेखेका छन् ।
पछिल्लो समय वाइड बढी विमान खरिद् प्रकरणमा मन्त्री अधिकारीको नाम मुछियो । यसबाहेक करिब ५० वर्ष लामो जीवन र करिब ३५ वर्ष लामो राजनीतिक जीवनमा अधिकारी कहिल्यै विवादित भएनन् । उच्च राजनीतिक छवि बनाएका अधिकारीमाथि आमनागरिकको ठूलो आश थियो । उनको निधनसँगै आमनेपालीको ‘आशाको दीयो’ निभेको छ ।
मन्त्री अधिकारीले गरेका महत्वपूर्ण कामः
भैरहवा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणको काम तिव्र
सुस्त गतिमा अघि बढेको भैरहवा विमानस्थलको स्तरोन्तीको कार्य मन्त्री अधिकारी आएपछि निकै दु्रत गतीमा अघि बढेको छ । जसको अहिलेसम्म ६८ प्रतिशत भौतिक निर्माणको काम सकिएको छ । आउँदो जेठबाट नै यो विमानस्थलबाट अन्तरराष्ट्रिय उडान परीक्षण गर्ने तयारी छ ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लक्ष्य भन्दा धेरै प्रगति
बाराको निजगढस्थित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य लक्ष्य भन्दा अघि नै सकिने भएको छ । विमानस्थल निर्माण हुने क्रममा रुख कटानको विषयले विवाद भएको थियो । रुखको नाममा विकास रोक्न हुन्न भन्ने मन्त्री अधिकारीको अडानकै कारण विमानस्थल निर्माणले गति लिएको हो ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २२ घण्टा सञ्चालनमा
दैनिक १८ घण्टा मात्र संचालन हुँदै आएको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल २२ घण्टा सञ्चालनमा आएको छ । जेठदेखि २१ घण्टा सञ्चालन गरिएको विमानस्थल भदौबाट २२ घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
दुईवटा वाइडबडी जहाजको रिसिभ
नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद् गरेको दुईवटा वाइडबडी जहाजको मन्त्री अधिकारीले नै रिसिभ गरेका हुन । यसले नेपाल वायु सेवा निगमको सेवालाई थप सहज बनाएको छ ।
विमानस्थलको कुर्सीदेखि सफाईसम्म
मन्त्री भएदेखि उनले विमानस्थल सुधारका धेरै कामहरु गरे । विमानस्थलमा रहेका कुर्सी फेर्नेदेखि शौचालय सफाइसम्मको ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’को काममा उनले निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहे । र त अहिले विमानस्थलमा यत्तिका सुधारहरु आएका छन ।
बुटिक विमानस्थल बनाउने प्रयास
मन्त्री रविन्द्र अधिकारीकै पहलमा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थलको रुपमा स्तरोन्नती गरिएको छ । विमानस्थल भित्र नेपाली कला, संस्कृतिसँग जोडिएका धेरै चित्र तथा गेट निर्माण गरिएको छ । नेपाली मौलिकता झल्कने खालका गेट, झयालको व्यवस्थापन, पर्यटकको सत्कारका लागि पानी भरिएको गाग्रो राखेर स्वागत गर्ने स्थान पनि बनाइएको छ । सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउने उद्देश्यअनुसार नै विमानस्थलमा परिवर्तन देखिएको छ । विश्वकै नराम्रो एयरपोर्टको लिष्टमा रहेको यो विमानस्थल अहिले निकै आकर्षक राखिएको छ ।
७७ जिल्लाका एक सय पर्यटकीय गन्तब्य पहिचान
पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पर्यटन म्रन्त्रालयले ७७ जिल्लाका एक सय गन्तव्य पहिचान भएको छ । मन्त्री अधिकारीकै पहलमा जिल्ला जिल्लाका पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान भएको हो । मन्त्री अधिकारीले आफ्नो कार्यकालमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै पर्यटक भित्र्याउन सफल भए । सन् २०१८ मा ११ लाख पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए । यसलाई पर्यटन क्षेत्रको निकै ठूलो उपलब्धिको रुपमा हेरिएको छ ।
सन् २०२० लाई ‘नेपाल भ्रमण वर्ष’ घोषणा
देशमा पर्यटन प्रपर्धन गर्ने उद्देश्यले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरिएको थियो । जसमा २०२० सम्ममा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिइएको छ । र सन् २०१८ मा नेपाल भित्रिएका पर्यटकको सङ्ख्याले उक्त लक्ष्य टाढा नरहेको प्रस्ट्याएको छ ।
नयाँ हवाई रुट कार्यान्वयन गर्न आइकाओमा निवेदन
मन्त्री अधिकारीको पहलमा भैरहवा र जनकपुरबाट नेपाललाई हवाइ प्रवेशविन्दु दिन भारत सहमत भएको छ । र भैरहवा र जनकपुरबाट क्रसबोर्डर हवाइ प्रवेश बिन्दु बनाउन लागि नेपाल र भारतले संयुक्त «रूपमा अन्तर्राष्टिय नागरिक उड्डयन संस्था –आइकाओ) मा आवेदन दिएका छन् ।
बन्द रहेका विमानस्थल सञ्चालन
देशभर जम्मा ५० ओटा विमानस्थल रहेका छन । जसमध्ये ३२ ओटा मात्र सञ्चालनमा छन । उनले बन्द रहेका विमानस्थललाई पूर्वाधार थप गरी सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य लिएका थिए । र राजविराज, दाङ, इलाम लगाएत ठाउँका विमानस्थलहरु पुनः सञ्चालनमा आईसकेका छन ।
झापाको भद्रपुरमा रात्रिकालीन उडान सुरु
दिउँसो मात्र सञ्चालनमा आईरहेको झापाको भद्रपुर विमानस्थलमा रात्रिकालिन सेवा सुरु गरिएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन कार्यालयले चन्द्रगढी नागरिक उड्डयन कार्यालयमा जडान गरेको इन्स्टुमेन्टल फ्लाइट रुल्स (आइएफआर) मार्फत भद्रपुर विमानस्थलमा रात्रिकालीन हवाइ उडान सेवा सुरु गरिएको हो ।
भूकम्पबाट ध्वस्त भएका सांस्कृतिक सम्पदा निर्माणमा जोड
२०७२ सालको भुकम्पले क्षतविक्षत भएका सम्पदाहरु पुननिर्माणमा गति लिन सकिरहेका थिएनन् । उनले पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरुको पुननिर्माणको कार्यलाई विशेष निगरानीमा राखेका थिए । र पुननिर्माणको गति पनि पहिले भन्दा बढेको छ ।
मन्त्री हुनुभन्दा अघिका उल्लेख्य काम
२०५६ सालमा सार्बजनिक सवारी साधनमा बिद्यार्थीलाई ५० प्रतिशत छुटको माग गर्दै बिद्यार्थीहरु आन्दोलनमा उत्रिए । जसको नेतृत्वकर्ता थिए रविन्द्र अधिकारी । त्यतिबेला उक्त आन्दोलनले देशव्यापी रुपमा तरंग पैदा ग¥यो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले बिद्यार्थीसंग वार्ता गरी ३३ प्रतिशत छुट दिने सहमती ग¥यो । हालसम्म पनि बिद्यार्थीहरुले सार्वजनिक यातायतमा ३३ प्रतिशत छुट पाउँदै आएका छन ।
त्यस्तै २०५७ श्रावण २२ गते तत्कालिन शाहज्यादा पारस शाहले चलाएको जीपका ठक्करका कारण गायक प्रविण गुरुङको मृत्यु भएपछि ‘शाहलाई दरबार होइन जेल पठाउनु पर्छ’ भन्दै सुरु भएको आन्दोलनको नेतृत्व अधिकारीले नै गरेका थिए ।